AKHRISO: Hooyada Dhashay Mid Ka Mid Ah Carruurtii Uu Gorgorku Ku Cunay Gaashaamo Oo Ka Sheekaysay Sidii Wax U Dhaceen - Jigjiga Online
HomeSomalidaAKHRISO: Hooyada Dhashay Mid Ka Mid Ah Carruurtii Uu Gorgorku Ku Cunay Gaashaamo Oo Ka Sheekaysay Sidii Wax U Dhaceen
Gaashaamo (JigjigaOnline) – Dadka ku nool degmada Gaashaamo ayaa carruurtooda ka ilaalinaya inay bannaanka uga baxaan guryaha, kaddib markii uu gorgor dad cun ahi ku cunay hal wiil kuwo kalena dhaawacyo u geystay.
Gorgorkan oo aan hore loogu aqoonin deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu sas ku riday dadka deegaankaas iyo degmooyinka kale ee ku agdhowba, waxaanay ka baqayaan inuu carruurta ka cuno.
Muno Shuceyb oo ah hooyada dhashay mid ka mid ah carruurta uu gorgorku dhaawacay ayaa waxay sheegtay in ilmaheeda oo guriga hortiisa ku ciyaaraya uu kusoo degay shimbir weyn oo qabsaday, laakiin markii ay maqashay dhawaaqa wiilkeeda yar ay ku qaylisay sidaana uu ku badbaaday inkasta oo uu dhaawacyo qabo.
Ilmahan yar ayaa lagu daaweynayaa cusbitaal, laakiin wali lama oga in shimbirkan uu yahay mid xanuunsanaya oo ka sokow dhaawaca uu u geystay carruurtan haddana horseedi karaya xanuunno kale.
“Waxaan maqalnay canugga oo aad u qeylinaya, guriga ayaanan orod kaga soo baxay. Waxaan arkay isagoo inanka dhulka ku haya oo afka ku garaacaya. Wuxuu ku qeylinayay ‘hooyo…hooyo’. Waan ku cararay waana ka fujiyay. Wuxuu ku hayay gacmaha oo dhulka ayuu ku bakhtiinayay.” Sidaas waxa tidhi hooyo Muuna Shucayb oo ka warrantay sidii ay wax u dhaceen.
Dawladda ayaa deegaankaas geysay askar badan oo lagu amray inay toogtaan gorgorkaas, sida uu xaqiijiyey Maxamed Xasan oo ah taliyaha booliska ee aaggaas.
“Wallaahi, tan iyo dhacdadaas ka dib, waxaa jira hawlgal boolis oo socda. Askarta waxaa la geeyay meesha iyo keynta. Waxaanu bixinay amar ah ah in la dilo balse weli wuu socdaa baadi-goobku”. Ayuu yidhi.